हिमालसँग जोडिएको पोखरा, नाजुक खानेपानीको अवस्था र अबको विकल्प – Arthik Awaj
हिमालसँग जोडिएको पोखरा, नाजुक खानेपानीको अवस्था र अबको विकल्प
By आर्थिक आवाज २०७५ भाद्र २३ गते शनिबार ०१:३४ मा प्रकाशित
मर्दी मुहान आसपासको समुदायमा सार्वजनिक शौचालय र शब दहन गृह निर्माणले सरोकारवाला बासिन्दा यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभाविन्त भएका छन् । जसलाई हामीले पुरा गरी सकेका छौं । सिदिङ, सैदिघट्टा, खोरामुख, मर्दी सेती दोभान, सेती दोभान र लस्तीघाट गरी ६ वटा सवदहनगृह मार्फत १२ वटा शौचालय, ६ वटा ट्रस १२ वटा ओदान निर्माण गरी सामुदायलाई हस्तारण गरी सकिएको छ ।
पहिलो पटक वि.सं. १९७६ सालमा बालधाराको पानीलाई पाइपलाइनबाट वितरण गर्न शुरु गरिएको पोखरामा वि.सं. २०२१ सालमा भोटी खोला परियोजना, २०३५ मा कालीखोला र २०४४ सालबाट मर्दी खोलालाई खानेपानी स्रोतका रुपमा प्रयोग गरिदै आएको देखिन्छ । वि.सं. २०२९ सालमा सरकारी तवरबाट पानी गोशराका रुपमा स्थापित भएर खानेपानी वितरणको व्यवस्थित विकासमा लागेको पानी अड्डा वि.सं. २०४६ कात्तिक ११ गते नेपाल खानेपानी संस्थानका रुपमा स्थापित भयो । शहरीकरणसँगै, बसाइसराई र बढ्दो जनसंख्याका कारण पोखरामा अहिले झण्डै ४ लाख जनसंख्या पुगिसकेको छ, ५ प्रतिशतका दरले जनसंख्या वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । वि.सं. २०१६ सालमा पोखरा नगरपालिका भई वि.सं.२०५२ सालमा पोखरा उप–महानगरपालिका हुँदै हाल सालै मात्र पोखरा महानगरपालिकामा रुपान्तरण भइसकेको छ । मौजुदा १८ वटा वडा नयाँ थपिएका १५ वडा सहित हाल पोखरा महानगरपालिका भित्र ३३ वटा वडा छन् । करिब ३ लाख ५५ हजार ३ सय ५७ परिवार र पोखरा घुम्न आउने करिब ३ लाख पर्यटकलाई स्वच्छ खानेपानीको आवश्यक छ । भौगोलिक बनावटका आधारमा सबै वडाहरुको अवस्था समान छैन, पहाड, खोंच, मैदान र भिरालो भूगोलले पानी वितरणमा असमानता देखिएको छ ।
प्रत्येक दिन एक जना मानिसलाई ४५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ, जसमा ३ लिटर पिउनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । पोखराको जनसंख्या र पानीको मागलाई हेर्दा दैनिक ६ करोड ५० लाख लिटर पानी आवश्यक छ । सुख्खा याममा मर्दी खोलाबाट ४ करोड ५० लाख लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ भने नेपाल खानेपानी संस्थानसँग ५ करोड लिटर पानी भण्डार गर्ने क्षमता छ । दैनिक २ करोड लिटर पानी पोखरालाई अभाव भइरहेको छ । करिब ४ सय ५० कि.मी. पाइप लाइन विस्तार गरिएको छ । हरेक वर्ष करिब ३ हजार मिटर पाइप लाइन विस्तारको माग भइरहेको छ । पोखरामा ३४ हजार ८९९ धारा जडित छन् जसमध्य ४ सय ३९ धारा मिटर रहित छन् । ३ सय ९८ सरकारी धारा अन्तर्गत १८९ वटा मिटर छैन् । जम्मा २ वटा सार्वजनिक धारा र ५ वटा इनारप्रयोगमा रहेको छन् ।
पोखरा आफैमा पानीको चरित्र भएको शहर हो । नेपालको चेरापुञ्जी भनेर चिनिने पोखरामा हिमाल, ताल, नदी, खोला, झरना, दह, कुण्ड, पोखरी, इनार र बोरिङ जलस्रोतका रुपमा रहेका छन् । खानेपानीका रुपमा निम्न स्रोतहरु मौजुदा अवस्थामा छन्ः
 बाल धारा
 भोटी खोला
 काली मुढा
 माझा कुना
 घट्टे खोला
 मर्दी खोला (४ करोड ५० लाख लिटर)
माथि उल्लेखित स्रोत मध्ये मर्दी खोला प्रमुख स्रोत हो । झण्डै ९० प्रतिशत हिस्या मर्दी मुहानले ओगटेको छ । यिनै उपलब्ध स्रोतबाट आएको पानीलाई विन्ध्यवासिनी, लामाचौर अमला बिसाउनी, माटे पानी र बाल धारामा ट्याङ्की राखी वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिएको भए पनि पोखराको खानेपानी उपचार नगरी केवल सामान्य थेग्ग्राउने र क्लोरिन मात्रै प्रयोग गरेर धारामा पठाउने गरिएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाले पोखरा नगरबासीबाट वार्षिक रुपमा करिब २५ करोड नेट प्रोफिट उठाएर संघीय सरकारलाई पठाउने गर्दछ । जुन नेपालमै सबैभन्दा राम्रो आय स्रोतको रुपमा लिने गरिन्छ । पानीको चुवावट करिब ५६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने करिब ५० करोड नेट प्रोफिट बचाउन सकिने नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाको तथ्याङ्क छ । तर पोखरेली नागरिकले खानेपानीको नाममा वर्षात याममा हिलो र लेदो पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९ध्ज्इ० को तथ्याङ्क अनुसार ८० प्रतिशत भन्दा बढी रोग प्रदुषित र संक्रमित हुँदा लागेको पाइन्छ । सफा र शुद्ध खानेपानी पाउने नागरिकको अधिकार हो भने सहज उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो । नागरिकस्तरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुँदा शुद्ध खाने पानीको लागि सरकार, गैर सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन् । पोखराको खानेपानीको प्रमुख स्रोत मर्दीलाई संरक्षण, संवद्र्धनका साथै सरसफाई सहित वितरण सुधार गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । ९८ वर्ष पुराना पाइपहरु हटाएर व्यवस्थित रुपमा नयाँ पाइप राख्नु आवश्यक देखिन्छ । पानी उपचार गर्ने ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट बनाई खानेपानी भण्डारणको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने छ ।
हाल मर्दी खोलाबाट सिधै पाइप लाइनमार्फत पोखरामा वितरण भइरहेको खानेपानी अशुद्ध र प्रदूषित मानिएको छ । मुहान आसपासमा माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका ९ वटा वडा मध्ये ६ वटा वडाहरु धिताल, धम्पुस, ल्वाङ, घलेल, रिभान र लाहाचोक क्रमशः ६, ७, ८, ९, ५, ४ वडाहरु पर्दछन् । यी वडाहरुमा घनावस्तीहरु थपिने क्रम जारी छ । वस्तीबाट निस्केको सम्पूर्ण फोहोर वर्षात बगेर मर्दी मुहान जाने पुग्ने गर्दछ । फोहोर मैलालाई उचित व्यवस्थापन गरी, सार्वजनिक शौचालय, कपडा धुने ठाउँ, शव दहन गृह बनाएर खानेपानी शुद्धीकरण गरी नगरबासीलाई सफा र स्वस्थ्यकर पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य हुनुपर्दछ ।
मर्दीको मुहान आसपासको समुदाय र पोखरा महानगरपालिकाका बासिन्दा यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका झण्डै ३५ हजार धारामा स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति हुँदा पोखरेली बासिन्दाको सफा पानीमा पहुँच पुग्ने छ । मर्दी मुहान आसपासको समुदायमा सार्वजनिक शौचालय र शब दहन गृह निर्माणले सरोकारवाला बासिन्दा यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभाविन्त भएका छन् । जसलाई हामीले पुरा गरी सकेका छौं । सिदिङ, सैदिघट्टा, खोरामुख, मर्दी सेती दोभान, सेती दोभान र लस्तीघाट गरी ६ वटा सवदहनगृह मार्फत १२ वटा शौचालय, ६ वटा ट्रस १२ वटा ओदान निर्माण गरी सामुदायलाई हस्तारण गरी सकिएको छ ।
पोखरामा आपूर्ति भइरहेको खानेपानीको मुहान मर्दी खोला आसापासमा जथाभावी फोहोर मैला फाल्ने, व्यावसायिक माछापालन गर्ने, खुला रुपमा दिशापिशाब गर्ने, कपडा धुने, पौडी खेल्ने, सवारी साधन गुडाउने र धुने कार्यले पानी प्रदूषित र संक्रमित बनेको छ ।
अझ अर्को समस्या खेतबारीमा प्रयोग गरिने ९ँभचतष्ष्शिभच० गेडे मल, युरीया मल पग्लेर मर्दी खोलामा पुगेर मुहान प्रदुषित र संक्रमित हुन पुगेको छ । जसलाई सामान्य ट्रिटमेन्टबाट हटाउन कठिन पर्दछ । ४ करोड ५ लाख लिटर पानीलाई त झनै सकिने कुरै भएन ।
जाइकाबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरुवात भएको छ । मुहान भन्दा तल मात्र लक्षित छ । जसको समय अवाधि १० वर्षे लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मर्दी (मुहान) खोलामा हाल २ वटा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट छ । मर्दी इदी हाइड्रोपावर (७.५ मेघावाट) गण्डकी हाइड्रो पावर (४.५ मेघावाट) रहेको छ । मर्दी हिमालको करिब करिब नजिकबाट मर्दी इर्दी हाइड्रोपावरले डेम बनाई पानीलाई पाइप मार्फत इदी मर्दी हाइड्रोपावरको पावर हाउस हुँदै गण्डकी पावर हाउसमा खसालिएको अवस्था छ । जुन ल्वाङघलेल लुम्रेमा पर्दछ ।
हिमालबाट हाइड्रोपावर लुम्रेमा खसालिएको पानी र पाउँ खोला जुन क्यानोनिङले प्रख्यात छ । यो दुवै ठाउँको मिलाएर सोही ठाउँलाई मुहान बनाई पानी ल्याउन सक्यौ भने सिधैं पोखरेली नागरिकले मर्दी हिमालबाट बगेको शुद्ध सफा पानी पिउन पाउने र माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको ६ वटा वडाको फोहर समेत नपर्ने कुनै विषादी फोहर मैला नपर्ने हुन्छ ।
अबको लक्ष्य भनेको मर्दी मुहानलाई हाल भइरहेको स्थानबाट करिब ४ कि.मी. पर लुम्रे पाउँ खोला र मर्दी दोभान आसपास सार्दा मुहान सुरक्षित हुन सक्ने भएकाले अब यसतर्फ बहस चलाउन आवश्यक छ ।
(लेखकः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तथा पोखराको खानेपानी मर्दीमुहान शुद्धीकरण परियोजनाका संयोजक हुन् ।)
प्रतिक्रियाका लागि Email: [email protected]